Awoodda suuqa ee mootada mootada waa mid aan la qiyaasi karin, iyadoo abuureysa fursado aad u fiican Shiinaha ayaa gashay darajooyinka soo saarayaasha waaweyn ee adduunka, laakiin marka laga eego aragtida guud ee xoogga iyo horumarka, soosaarka sanadlaha ee Shiinaha ee mashiinka ...
Falanqaynta Hawsha Qulqulka qulqulka Lakabka Inta lagu gudajiro Ka Shaqeynta Mootada Baaskiilka
(1) Laalaabyada mootada la jeexjeexay waxay u baahan yihiin lakab carrabized ku yaal dusha ilkaha. Marka la adeegsado habka "carburized-dinta extrusion" habka, qaybinta lakabka carburized wuxuu si dhow ula xiriiraa habka foosha ee samaynta qalabka. Nidaamka kala-soocidda kala-soocidda la taaban karo, ...
Cadaadiska daaweynta kuleylka waxaa loo qeybin karaa cadaadiska kuleylka iyo culeyska unugyada. Qallooca daaweynta kuleylka ee qeybta shaqada ayaa ah natiijada ka dhalatay isku dhafka isku buuqa kuleylka iyo walbahaarka unugyada. Xaaladda culeyska daaweynta kuleylka ee qeybta shaqada iyo saameynta ay keento way kala duwan yihiin. Intee ...